Sarkaal ka tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo lagu dilay Gaalkacyo.[Masawiro]
February 2, 2018 - Written by Editor
Gaalkacyo:-Waxaa maanta Allah u naxariistee salaadii Jimce ka dib gaarigiisa qarax miino ah loogu xiray Faarax Caato oo ka mid ahaan Jiray ciidankii Sirdoonka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya tababaro badan ku soo qaatay dalka dibadiisa.
Faarax Caato ayaa ilaa intii burburka Dowladdii Soomaaliya ka dib waxaa uu ku noolaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug , Faarax Ciise Samatar (Caato) ayaa waxaa uu ahaa Sarkaal aqoon fiican u leh Ciidamada waxaan uu noqday tababare.
Aaska Faarax Ciise Samatar (Caato) waxaa ka soo qeyb galay Taliyaha Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya, Madaxweynihii hore ee Gal-Mudug, gudoomiyaha gobalka Mudug, gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo waxgarad kale.
Sarkaalkaan ka tirsanaa jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa qaraxu haleelay duhurnimadii maanta xili uu marayey Xaafadda Israac ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ka dib markii uu soo tukaday Salaadii Jimce.
Saraakiil badan oo ka tirsanaa jiray Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay dilal qorshaysan waxaa dilal loogu geystay gobollada dalka Soomaaliya.
Xuquuqda masawirada waxaa leh wariye Said Nadaar